Ukhetho lohulumeni bendawo: Sekuyisikhathi sabanye sokudla - Bayede News
Ukhetho lohulumeni bendawo: Sekuyisikhathi sabanye sokudla
Isithombe: nguNic Bothma/EPA
UHulumeni Wendawo ungosondele kakhulu ezimfunweni zabantu. Yiwo abantu abawaziyo nokulula ukuba ulaka lwabo luqale kuwo uma izinto zingahambi kahle. Khona lapho kukuHulumeni Wendawo lapho osopolitiki bezizwa khona amandla njengoba beshisa khona imibango ezimbangini zabo. Lesi simo sidalwa wukuthi ngisho izinhlaka ezimqoka zeqembu amagatsha noma amaziko atholakala futhi aklanywe kulandelwa imingcele yomasipala. Ngakho abaphethe umasipala bangawaphatha namaziko. Lokhu bakwenza ngokwezikhundla kanye nemiklamo yemisebenzi kumasipala.
Kule minyaka eyedlule kukhona obesekuqapheleka ngokhetho loHulumeni Bendawo njengoba beseluphenduke inkudla yokulwa izimpi zepolitiki yamaqembu kanye namathamelangozi afuna ukuyothola izikhundla ukuze akwazi ukwaba amavenge. Kulokhu kugovuzwa imiphakathi kusetshenziswa izimfuno ezaziwayo. Muva nje abeSouth African Police Service (Saps), abe-Incident Registration Information System (Iris), bathe imibhikisho yezimfuno engama-909 iqoshiwe kusuka ngomhla lulu-1 kuNcwaba wezi-2020 kuya zingama-31 kuMasingana ngowezi-2021.
Lezi zibalo zibukeka ziwumkhokha njengoba leli lizwe laziwa njengelihamba phambili ngemibhikisho kanye naleyo enodlame. Ukuqaphela lokhu kuqale ngeminyaka yezi-2004 eNtabazwe (abelungu abathi yiHarrismith). Ngowezi-2013 nje kuphela eGauteng kwabikwa ukuthi kube nemibhikisho yezimfuno engama-540 kusuka lulu-1 kuMbasa kuya zili-10 kuNhlaba. NgoNhlolanja wezi-2014 kwabikwa ukuthi kube nemibhikisho ‘ebalelwa ezi-3 ezinsukwini ezingama-90 ezedlule, engaphezu kwengama-30 ngosuku, ebandakanya abantu abangaphezu kwesigidi’.
Ngowezi-2016 kuze kube zingama-30 kuMbasa, ezobunhloli zomasipala iMunicipal IQ yaqopha imibhikisho engama-70. Ukuba izinga lemibhikisho yezimfuno belilokhu linjalo bekuyosho ukuthi ngonyaka belingafinyelela ema-210 obekuzoba yisibalo esiphezulu ngokungakaze kubonwe uma kuqhathaniswa nemibhikisho eli-164 yangowezi-2015 neli-191 (okwamanje kuyilo eliphezulu) ngowezi-2014. Okhethweni lomasipala lwangowezi-2011, imibhikisho yezimfuno yadamba yaba ngama-82 uma kuqhathaniswa neminyaka emibili eyadlula kanye naleyo eyalandela. Ezinyageni zokuqala ezine ngowezi-2016 iGauteng yaba phezulu ngama-26% emibhikisho yezimfuno ilandelwa eduze yi-Eastern Cape ngama-24%. UKevin Allan, uMqondisi olawula iMunicipal IQ, uthi: “Iningi lale mibhikisho yenzeka emijondolo nasezindaweni ezingathuthukisiwe lapho izinsizakalo ziseyinselelo enkulu.” IFree State ibe nephesenti elilodwa vo kuze kube namhlanje kulo nyaka kulandele iNorthern Cape ngama-4, yiLimpopo ngama-6%, yiNorth West ngama-7%, yiMpumalanga ngama-9%, yiWestern Cape ngama-11% neKwaZulu-Natal ngama-12%.
Izizathu ezibekwayo kule mibhikisho kuba wudaba oluthinta izindlu, ukungabi namhlaba namanzi. Ngalezi zikhathi akugcini nje ngokubhujiswa kwempahla kepha namalungu omphakathi ayalimala njengoba amaphosyisa ewaqhelisa ngezinhlamvu zenjoloba (kokunye kube nezinsolo zokuthi besekusetshenziswa izinhlamvu zangempela). Amanye amalungu omphakathi ayaboshwa nokuqhuba ukucija kwemikhonto emphakathini. Kwezinye izindawo amakhansela azithola eselala obenyoni njengoba imizi yawo ibhujiswa agcine esefuna ukugadwa nokudla kulo isaka obekumele ngabe lihlinzekela imiphakathi
Akugcini ngokuthi kube ngamalungu omphakathi angenela imibhikisho egcina isinodlame ngoba nezinye izinhlaka zomphakathi kanye nezisebenzi ziyalisebenzisa ithuba lokwazi ukuthi osopolitiki namaqembu abo ngalesi sikhathi basuke benegcindezi yokukhankasa.
INingizimu Afrika ingelinye lamazwe asedume ngemibhikisho yomphakathi enodlame
NgoNhlaba nangoNhlangulana wezi-2019, uMasipala i-Ethekwini wama nse njengoba imibhikisho enodlame yadwengula idolobha emveni kokuba izisebenzi zikaMasipala zitelekile, zifuna ukwenyuselwa amaholo. Lokhu kwenzeka emveni kokuba izisebenzi zithole ukuthi uMasipala uphatha omakadebona beMK kangcono mayelana nokukhushulwa ezikhundleni nasekukhushulelweni amaholo. Umonakalo owadalwa yimibhikisho wengqalasizinda waba ngaphezudlwana kwezigidi ezi-R4, lokho okwagcina kuthikameza ukulethwa kwezinsizakalo kanye nomnotho nje wonke.
Amathamelangozi nawo acuthile.
Abanye abahlomulayo ngokugovuza umphakathi yilabo abasuke begaqele izikhundla eqenjini, okuthi bangahluleka bese belishisa ilokishi noma indawo leyo. Lokhu bakwenza ngokucijisa imikhonto endaweni. Laba kusuke kungabaholi abaziwayo eqenjini abasebenzisa umphakathi ikakhulukazi intsha ukuthi ibasele ukuze ikhansela elikhona libe nyamanambana kakhulu njengoba sekusele izinyanga nje ukhetho lube khona.
Okhethweni olwedlule lowo osenguNgqongoshe uNks uThoko Didiza wahlelelwa impi ngabakwabo ngesikhathi uKhongolose eTshwane umfaka njengozoba yiMeya. Kwabe kabazwanga abaholi bendawo, bagovuza umphakathi lasha idolobha. Lokhu kwavezela izwe lonke ukuthi ukuba yikhansela lokhu sekungakhipha isidumbu ngoba ongenile uzibona esemkhulu.
Lolu hlobo lodlame kwake kwacatshangwa ukuthi yizinto nje zasemadolobheni. Nokho lowo mbono awuselona iqiniso njengoba imibhikisho lena isikhonjwa nasezindaweni ezikude namadolobha.
EVuwani eliMpopo ngowezi-2016 izakhamuzi zahlangana zikhala kokuklaywa kwemingcele eyabe ibeka le ndawo ngaphasi kweVhembe. Lokhu kwawunenga umphakathi owabona ukuthi ukugwinywa kwawo yiVhembe kusho ukulahleka kwamathuba emisebenzi. Lokhu kwaholela ukuba kube nemibhikisho enodlame neyagcina ikapakela nakwezemfundo, ukuvalwa nokuqolwa kwezitolo nokulimala kwabantu.
Umbhali ukhala ngokufunzwa ngamakhansela nangezimeya
Omunye umkhuba oqaphelekayo muva nje yilowo wemibhikisho ehlelwa yiwo amaqembu agovuza umphakathi ukuze kunyundelwe elinye iqembu. Ukwehlulwa kukaKhongolose komasipala abakhulu kwenza leli qembu libe sendaweni elingayijwayele – seliyiqembu eliphikisayo okokuqala ngqa. Lokhu kwenza labuyela emlandweni walo wokukwazi ukudidiyela umphakathi nokwenza kwabonakala yanda imibhikisho eholwa yileli qembu komasipala lapho lingenamandla khona. Lokhu kwenza kulezo zindawo kungabuseki.
Kepha khona lapho amalungu eqembu ayogovuzwa ukuthi ayobasela abaphethe. Muva nje eMangaung lapho iqembu elibusayo linamandla khona, umphakathi owavotela uKhongolose nonguKhongolose ungene umgwaqo kwavutha ithayi.
Akugcinanga lapho kepha kube sekubhujiswa izitolo ezinye kwebiwa imphahla baboshwa nabantu.
Okumangazayo uma kunalezi zigameko ukuswelakala kolwazi lwezinhloli okuthi uma lukhona kukwazi ukuba izimo zodlame zigwemeke. Okuqaphelekayo yikuthi nawo amaphoyisa agcina esezwa ngabantu ukuthi kushubile. Umbuzo wukuthi ngabe ukusebenza kophiko lwawo lwezinhloli luyakwazi yini ukuzwa izinto zisekude ukwenzeka, zisahlelwa?
Ubufakazi obusobala buthi cha, amaphoyisa nawo athuka njengawo wonke umuntu okuyinto ethusayo. Kuza ukhetho nje loHulumeni Bendawo, kulindeleke ukuthi zande izigameko ezifana naseMangaung khona lapho kulindeleke ukuthi kucije imikhonto kubhubhe nempahla kokunye balimale nabantu.
Amathamelangozi nawo kulindeleke ukuthi angazibeki phansi kwazise ayakholwa ukuthi lesi sekuyisikhathi sawo ukuba adle njengoba kade ebuka abanye bezitika.
Esethulweni sabakwaHuman Sciences Research Council (HSRC) ngaphansi kwesihloko: ‘The social costs of violent and destructive service-delivery protests in South Africa’, ababhali baphetha ngelithi: “Ukulinyazwa kwengqalasizinda yomphakathi kufanele kubukwe njengokushisa ibhuluho okufanele lifinyelelise abantu empilweni engcono. Impikiswano eqhubekayo eyadluliswa ngesikhathi semibhikisho enodlame nephihliza impahla eyokuthi uHulumeni ubona impahla ingcono kunempilo yabantu abatelekela ukulethelwa izinsizakalo kangcono nokuyindlela abazwakalisa ngayo abakudingayo. Umnyombo wale nkinga ukuhluleka kukaHulumeni ukuxoxisana mayelana nomonakala wokulimaza.”